Cano Cristales – Webiga ‘Shanta Midab’ ama Qaanso-roobaad | Radio Himilo
Home / Deegaan / Cano Cristales – Webiga ‘Shanta Midab’ ama Qaanso-roobaad
Cano Cristales – Webiga ‘Shanta Midab’ ama Qaanso-roobaad
Posted by: Mahad Mohamed June 17, 2020
Himilo – Webiga Shanta Midab’ ama ‘Webiga Qaansa-roobaad’, Cano Cristales waa mid kamid ah webiyada ugu cajiibka badan caalamka.
Inta ugu badan sannadka, Cano Cristales river oo ku yaalla dalka Colombia kaliya waa mid aan ka duwanayn qulqul biyoodka webiyada. Hayeeshe xilli kooban oo kamid ah waqtiga, wuxuu yeeshaa muuqaal ku xardhan midabyo kala jaadad ah. Ajada yaryar ee ka hoos baxaysa biyaha ayaa iska leh sababteeda.
Qulqulka biyaha webiga waxay joogtaysaa tirada kulka cadceedda ee ku dhacaysa ajada, marka la gaaro xilli roobaadkana, biyaha waxaa ku adag inay ku sugnaadaan webiga – hayeeshe, inta u dhaxaysa labada xilli, marxaladaha ayaa ka kaalmeeya midabyada webiga Cano Cristales inay soo if baxaan.
Marka la joogo xilligan, webiga oo dhan waxaa daboola midabyo kala jaadad ah sida buluug, cagaar iyo casaanka oo ay u dhaxeeyaan lakabyo ama hoosiis. Laakiin muuqaalkaas quruxda leh wuxuu ku idlaadaa maalmo kooban oo u dhaxeeya deyrta iyo jiilaalka. Balse taas ayaaba kasii dhigi karta mid xiiso goonni ah xanbaarsan.
Nasiib-darro, webiga Cano Cristales wuxuu ku yaallaa meel aad uga fog dadka oo ku taalla duleedka La Macarena. Gaadiidka kaliya ee lagu gaari karo ayaana ah faras ama baqal. Sidaas darteed, kaliya hey’ado yaryar oo socdaalka iyo dalmarka qaabilsan ayaa dalxiis ku bixiya.
Si kastaba, webiga Cano waxaa marmar lagu sifeeyaa webiga ugu quruxda badan webiyada caalamka.
Previous: Man United oo loo sheegay lacagta lagu heli karo Ansu Fati
Next: Arteta oo doonaya in David Luiz uu sii joogo Arsenal